Hutano, 01 Ndira 2013
Chipiri 1 Ndira 2013
Mapato Obatana Mukuradzika VaSeiso Moyo muBulawayo
Vaive mutevedzeri wegurukota rezvekurima, uye vari munyori anoona nezvesarudzo muMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, Va Seiso Moyo, varadzikwa neMuvhuro kumarinda e Lady Stanley kuBulawayo.
Mbudzi 14, 2012
Zimbabwe Inocherechedza Zuva reChirwere cheShuga Pasi Rose
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza matambudziko ari kutarisana nepasi rose mukurwisa chirwere chishuga.
Mbudzi 07, 2012
Nyika Yokurudzirwa Kugadzirisa Dambudziko reMvura
Nyanzvi munyaya dzehitano dzinoti Zimbabwe inofanirwa kukoshesha hutano hwevanhu kuburikidza nekuita zvirongwa zvinobatsira veruzhinji munyaya dzehutano.
Gumiguru 11, 2012
Zimbabwe Inocherechedza Zuva reVanasikana Pasi Rose
Vachitaura pachiitiko ichi chaitirwa kuChitungwiza, mudzimai wemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, Amai Elizabeth Tsvangirai, vakurudzira vanasikana kuti vawaniswe mukana wekudzidza zvinozoita kuti vasakurumidze kuroorwa.
Gumiguru 10, 2012
Nhengo dzeMDC Dzinonyimwa Zvakare Mukana weKubvisa Mari yeChibatiso
Nhengo dzeMDC inotungamirwa nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, makumi maviri nepfumbamwe dziri kupomerwa mhosva yekuponda dzanyimwa zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti dzienderere mberi nekutongwa dzichibva kudzimba dzadzo.
Gumiguru 09, 2012
Harare Yoomesera Makombi Asingakodzeri Kupinda Mugabe
Kanzuru yeguta reHarare yawedzera mapurisa ainayo nemazana maviri kuitira kuti mapurisa aya afambise chirongwa chekuchenesa guta kuburikidza nekubvisa dzimotokari dzisina mvumo yekutakura vanhu muguta.
Gumiguru 08, 2012
VaMudenge Vanovigwa paHeroes Acre muHarare
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, neMuvhuro vakurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dziri pachena uye dzisina mhirizhonga.
Gumiguru 03, 2012
Maguta Akawanda Obatwa neDambudziko reMvura
Kanzuru yeHarare yakatozivisa vagari kuti vachange vasina mvura kusvika mukupera kwesvondo sezvo dambudziko iri rakakura
Global Fund Inopa Zimbabwe Mamiriyoni Makumi Masere eMadhora
Sangano re Global Fund rakapa neChipiri Zimbabwe mari inosvika makumi masere nemana emamiriyoni emadhora.
Gunyana 21, 2012
Amai Vesta Sithole Vanoshaya muAmerica
Amai Vesta Sithole vakashaya neChina manheru muMaryland paSouthern Maryland Hospital.
Gunyana 18, 2012
Harare Residents Trust Yotsvaga Nzira dzeKupedza Dambudziko reMvura
Sangano reHarare Residents Trust rinoti ratanga chirongwa chekutsvaga makuriro edambudziko rekushaikwa kwemvura muHarare uye kuti dambudziko iri ringagadziriswe seyi.
Zvizvarwa ZveZimbabwe Zvicharatidzira kuUnited nations Nhasi Chishanu
Manyoka Ovhiringa Vakawanda Vaichema VaMugabe kwaZvimba
Nhumwa yeUN, VaClement Voule, Vanoita Musangano naVaMudenda
Dare Rinoudza Mapurisa Kuti Asavhiringe Kuratidzira kwaVanachiremba muHarare